Iyini Injongo Ye-Wiki? - Semalt Uyazi Impendulo
U-Oliver King, uchwepheshe we-8 (Semalt , uthi i-Wiki isebenzisa i-digital Encyclopedia engakwazi ukuziqhayisa ngezihloko ezihlukahlukene. Ngenye yamawebhusayithi asetshenziselwa kakhulu ngenxa yempumelelo yayo ekuhlinzekeni ulwazi oludingekile. Ngemuva kokudalwa kwe-"Persoonia terminals," le sayithi inezihloko ezingaphezu kwezigidi ezingu-5 ezikhuluma ngezihloko ezahlukene. Amaqembu ahlukene anethuba lokuveza ulwazi lwabo ezimfundisweni ezihlukahlukene emhlabeni wonke. Ososayensi basebenzisa i-Wikipedia ukuze badlulise ukutholakala okubucayi kwesayensi.
Ngaphezu kwalokho, noma yikuphi okuqukethwe kwi-Wikipedia inikeza izibalo ezidingekayo nezinkomba. Kukhona imifanekiso eqondile kanye nezixhumanisi kanye nezifundiso kunoma yiziphi izinto zokubhekisela. Abantu bangaxhumana no-Wiki ukuthola iziqondiso ezihlokweni ezihlukahlukene. Noma yimuphi umsebenzisi uvunyelwe ukufunda, ukuhlela, ukuphawula nokuhlanganyela imicabango yakhe kunoma yini. Ukuze unciphise indaba ende, i-Wikipedia ikhululekile ukusetshenziswa nanoma ubani emhlabeni. Futhi, abasebenzisi bangakha ama-akhawunti wabo womsebenzisi.
Phakathi kwamawebhusayithi angama-35 athandwa kakhulu, i-Wikipedia iyona kuphela inhlangano yenhlangano engeyona inzuzo efuna isikhala esikhulu sokubamba. Isekelwe endaweni yokubamba kwama-terabytes angaphezu kuka-30. Abacwaningi balinganisela ukuthi izihloko ezikhona kumakhasi e-Wikipedia zisebenzisa okungenani izikhombo ezingu-18million. Lezi zikhombo zinokubukwa kwekhasi elingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu-2,5 ngosuku. Ngenxa yalokho, i-Wikipedia inesisekelo esikhulu solwazi, esedlula wonke ama-bases yolwazi ngamazwe ngamazwe. Abasebenzisi bangaxhumana no-Wiki ukwenza imisebenzi eminingi.
i-Wikipedia yasungulwa ngomhla ka-15 Januwari 2001. Ukubonakala okubonakalayo kwekhasi layo lendabuko kwavela ngoNovemba ngonyaka ofanayo. I-Wikipedia yafinyelela izihloko ezingu-2 million ngonyaka ka-2007. Ngonyaka ka-2009, yayinabhalisile abayizigidi ezingu-3 futhi yayingama-4million ngo-2012. Enye yezinkonzo zayo eziyinhloko ihilela ukuhlinzeka umhlaba ngokufinyelela kuwo wonke ulwazi lwabantu!
Naphezu kwalezi zimpumelelo, i-Wikipedia ihlala endleleni eya emigomweni yayo. Kusukela isimemezelo sazo ezizigidi ezingu-5, kwabikwa ukuthi badinga izihloko ezingaphezu kwezigidi eziyi-100 ukumboza ingxenye enkulu yemigomo yabo. Ukuqoqa inani lemininingwane yabantu kwiwebhusayithi elula akuyona umsebenzi olula ukwenza. Engxoxweni neLiber, kuzomele kube nezihloko eziningi ezihlanganisa ezinye izindawo ezihlukahlukene zomhlaba. Ukuthambekela kwewebhusayithi eya entshonalanga kungahle kube yinto encane kakhulu.